Nsogbu na ihuenyo ụfọdụ Galaxy Fold | Gam akporosis
N'oge ọ malitere ahịa ya, Samsung kpebiri inye ndị nta akụkọ ụfọdụ nkeji nke Galaxy Fold ya nke uwa nile. N'ụzọ dị otú a, ndị nta akụkọ a nwere ike nyochaa ekwentị na nwalee ọrụ ya. Ọ bụ ezie na ọ dị ka enwere nsogbu ụfọdụ na nke a, na ihuenyo ekwentị. Ebe ọ bụ na ụfọdụ n’ime ha na-akọ odida na ekwentị, ọbụnadị mmebi ya. Ya mere nke a dị njọ.
Nsogbu ndị megoro na nke a dị iche icheHa sitere na malfunctions na ọnọdụ ndị ọzọ ebe ọ na-egosi na ihuenyo nke Galaxy Fold ka agbajiri. Mana ọ bụ n'ezie nsogbu dị egwu maka akara Korea, na oge ndopuru site na ekwentị gị.
Ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị ka ihe eji arụ ọrụ na ihuenyo nwere ike inwe ihe jikọrọ ya. Dị ka a hụrụ na nkwupụta ya, Galaxy Fold nwere ihuenyo nke polymer, nke bụ ihe na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-esighị ike, ọ nwere ike imetụta ya. Tụkwasị na nke ahụ, ekwentị na-abịa na ụdị nchebe ihuenyo, dịka a ga - asị na ọ bụ rọba dị mkpa, nke ha na - arịọ ka ewepụ ya n'oge ọ bụla.
Mgbe otu ụbọchị ojiji ... pic.twitter.com/VjDlJI45C9
Ọ dị ka ụfọdụ ndị wepụrụ akwa nchekwa a, agbanyeghị na ọ dị ka ọ bụ isi mmalite ọdịda. Usersfọdụ ndị ọrụ achọpụtala ọrụ na-adịghị arụ ọrụ na ihuenyo nke Galaxy Fold ha. Dịka ọmụmaatụ, a na-ahụ ha ka ha na-enwu gbaa na ya, ma ọ bụ na-egosipụta ozi naanị n'otu akụkụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na mmebi ahụ dị na njikọta na ngosipụta.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọdịda ndị a na ekwentị yiri ka ọ ga-ebili site na ojiji. Ọ bụ ezie na n'otu n'ime ikpe ahụ, ọnọdụ ahụ dị njọ, ebe ị nwere ike ịhụ otu akụkụ buru ibu nke ihuenyo ekwentị si agba oji. Dị ka nke a na-eme, ọ baghị uru, na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji ekwentị.
Samsung amaa ọkwa na-arụ ọrụ na ndozi maka nsogbu ndị a na ihuenyo Galaxy Fold. Companylọ ọrụ ahụ ga-akpọtụrụ ndị ọrụ ahụ metụtara, mana ha ekwughi ihe ndị ọzọ. Anyị ga-ahụ ihe mbido ọdịda a bụ nke ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, n'ihi na ekwentị ga-adị n’ahịa n’oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ogige atụrụ ahụ nwere nsogbu na ihuenyo ya